Iibhulorho ezakhiwayo – SBAfrikaans
Le nkqubo ijongene nabafundi abenza u-Grade 12 abakwizikolo ezisemaphandleni ababonisa ukuzimisela kwizifundo zabo kwaye besethubeni lokuya kumaziko aphakamileyo emfundo. Njengoko le nkqubo yasekwa ngenkxaso ye-Dagbreek ngowama-2015, kule minyaka imbalwa izayo le nkqubo iza kusiwa nakwiingingqi ze-Hessequa ne-Cederberg. Kulo nyaka, kuzakuqukwa izikolo ezili-17 kwakunye nabafundi abamalunga nama-80 kule nkqubo.
Abafundi abaye bagqwesa ekupheleni konyaka ka-Grade 11 banethuba lokuya kucweyo olulungiselela umfundi kwimiceli-mngeni kwimfundo ephakamileyo. Oku kuquka ukufundiswa iindlela zokufunda, amakhondo emisebenzi anokulandelwa, ezonxibelelwano ngokwasemzimbeni, ukuphatha imali kunye nezakhono ngezasentlalweni.
Amacweyo ajongene namakhondo emisebenzi enokulandelwa ajongise kubafundi baka-Grade 11 kwaye izifundo ezinokuthi zikhethwe zenzelwe abafundi baka-Grade 9. Zonke ke ezi zinto ziye zichatshazelwe kula macweyo ukulungiselela umfundi imfundo ephakamileyo.
Iiseshoni ezijongene nokukhankathela umfundi ngamnye zibhexeshwa ngamakhankatha azingcaphephe kwiilwimi rhoqo emva kokuba kugqitywe ucweyo kwaye oku kugxila kulwimi olukumgangatho othe qabavu olusetyenziswayo kwimfundo ephakamileyo.